Amerika Latina: “Reporting On”, Twitter Vaovao Ho An’ny Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2017 20:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Français, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 10 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nisy vokany lehibe teo amin'ny vohikalam-baovao maro naniry haka tahaka ny fahombiazan'ny Twitter (bilaogy madinika) : hafatra fohy nalefa avy amin'ny fitaovana maro (solosaina, finday, hafatra eo noho eo) ho an'ny mpisera voafetra. Iray amin'ireo tranonkala nandika ny raikipohy ny Reporting On, karazana Twitter ho an'ny mpanao gazety, ary azo jerena amin'ny dika andrana nanomboka tamin'ny 2007. Raha misoratra anarana ao ianao dia ho hitanao fa lasa nanomboka be mpampiasa ity tolotra ity, indrindra ho an'ny mpanao gazety ao Amerika Latina.
Mitovy toy ny an'ny Twitter ny rafitra : afaka mandefa hafatra ianao raha toa ka latsaka ny 140 ny litera ao aminy. Mandefa vaovao amin'ny endrika lohatenin-dahatsoratra ny mpisera. Azo asiana marika maro (teny fototra) ny vaovao tsirairay. Ao amin'ny tsanganana havia no ahitana ireo hafatra malaza indrindra. Azo atao ny maneho hevitra isaky ny hafatra tsirairay sy ny mamaly izany, kanefa azo atao ihany koa ny miaro ireo hafatra mba tsy hisy “hanjohy” na manisy sivana ny votoaty.
Niantsafa tamin'i Ryan Sholin i Pablo Mancini, izay ao ambadik'ity tetikasa tsy mitady tombontsoa ​​vatsian'ny orina mpanasoa Knight News Challenge vola ity mba “hanatsarana ny vaovao ao an-toerana amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo olona tsy ampy fifanakalozan-kevitra.” Hoy ihany koa izy: “Raha vao ampy tsara ny isan'ny fampiasa ato anatin'ity tolotra ity, dia efa afaka ampiasaina maimaim-poana ny toromarika ary hanasa ireo mpanao gazety sy ny mpandraharaha aho mba hanatsara izany, mba hahafahany manomboka voatra manokana amin'ity tranonkala ity ” .
Lahatsoratra hafa momba ny tolotra Reporting On : Bloc de Periodista (amin'ny teny Espaniola); The Exploding Newsroom; Random Mumblings sy Linchpen (amin'ny teny Anglisy). Ary hita ao amin'ny DigiDave ny famoahana ny antsafa iray hafa niarahana tamin'i Ryan Sholin.
(Naotin'ny Toniam-pandikanteny: Mariho ihany koa fa efa tsy hita intsony koa ny nanjavonan'ity tetikasa ity)